Adıyaman, uyo akapupurira iyo yakasarudzika maonero eCommagene tsika nekuitika padanho renhoroondo nehupfumi hwayo hwechinyakare, zvakasikwa uye tsika tsika, iri kugadzirira International Nemrut Mutambo. Adiyaman [More ...]
Kukanda kongiri kwakatangwa muKarakoyun Bridge Interchange uye Viaduct kuvakwa, iro kuvaka kwavo kwakawedzera kukurumidza na byanlıurfa Metropolitan Municipality. Kuvakwa kwe vioduct pamharadzano, idzo dzakambogadziriswa nemigwagwa yekuseri yekushandira vagari, iri kuenderera mberi nekukurumidza. Şanlıurfa traffic [More ...]
Diyarbakır Metropolitan Municipality akaronga chiitiko paKaracadağ Ski Center nevadzidzi nevadzidzisi vakadzidziswa mukati meBilgi House. Diyarbakır Metropolitan Municipality Dhipatimendi reVechidiki neMitambo Services, vachidzidza muImba yeruzivo [More ...]
Kuyambuka kwechipatara muchipatara neGaziantep Metropolitan Municipality uye General Directorate yeMigwagwa mikuru yeBazi rezvekutakurwa kwezvinhu uye Zvivakwa kuti vadzivise kusagadzikana kwemigwagwa kutenderera Gaziantep City Hospital, iri kuvakwa nebazi rezvehutano. [More ...]
Zvikumbiro zveTEKNOFEST Kuuya Kumugumo
Zvikumbiro zveTEKNOFEST, imwe yemitambo yakakura kwazvo yekufamba, nzvimbo uye mitambo yemuchina munyika, inoenderera mberi. Mutambo uyu uchaitwa kuGaziantep kunze kweIstanbul kekutanga gore rino. Kuti mutambo uitwe musi waGunyana 22-27 [More ...]
Sekureva kweDare reAccounts Report, Şanlıurfa Trambus Project iri mukutyora kweMutemo
2018 Dare reAccounts Rakagara Rakaitwa Ripoti Rechimwe chezvinhu zvinokosha zvePruzhinji Procurement Mutemo weiyo trambus chirongwa, iyo isingawa kubva pakurongwa kwe Şanlıurfa. yakaratidza kuti yaityora nheyo dzekujeka, kukwikwidza, kurapwa zvakaenzana, kuvanzika, uye kushandiswa kwakanaka kwezvinhu [More ...]
Gaziantep Bhuru Yakavanzika Veruzhinji Mabhazi Anochinjirwa KuPuru System
Gaziantep Metropolitan Municipality yaparura nendege nyowani mumabhazi eruzhinji akazvimirira evaridzi venzvimbo dzichangotanga uye kuwedzera zvifambiso zvevanhu, yakachinja hurongwa ichi ndokuchinjira kuchimbuzi. Metropolitan Municipality Transportation department [More ...]